Anker PowerConf C300, kamarad casri ah iyo natiijo xirfad leh | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 01/06/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 27/05/2021 20:04 | General, Reviews
Wada shaqeynta, shirarka, wicitaanada fiidiyowga ee weligood ah ... Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in kamarada webka iyo makarafoonka laptop-kaada aysan u fiicneyn sidii aad filaysay, gaar ahaan hadda markii noocaan oo kale ah isgaarsiinta dhijitaalka ah ay noqotay mid caadi ah. Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xal aad u soo jiidasho leh dhammaan cudurradaas.
Waxaan falanqeyneynaa Anker PowerConf C300 cusub, kamarad waxqabad sare leh oo leh xallinta FullHD, xagal ballaadhan, iyo astaamaha Sirdoonka Artificial. Nala garo dhamaan astaamaha qalabkan gaarka ah iyo maxay yihiin qodobada ugu xoogan marka la barbardhigo tartamayaasha tooska ah, iyo dabcan sidoo kale dhibcihiisa daciifka ah.
2 Rakibaadda iyo software customizable
Waxaan horey u ogaanay Anker kahor, waa shirkad u janjeerta inay kuqarxiso naqshadaha qiimaha leh iyo walxaha kujira alaabteeda, waana wax xiriirkeeda sicirka ah uu aad noogu cadeeyo. Dhanka naqshadeynta, waxay leedahay qaab si cadaalad ah loo yaqaan, waxaan leenahay gudi dhexe halkaasoo dareemayaasha ay ku badan yihiin bartamaha, oo ay ku hareereysan yihiin giraan midab bir ah leh oo aan ku aqrin doonno awoodeeda. Qabashada 1080p (FullHD) oo leh qiimayaasha qaabdhismeedka 60FPS. Dhabarka waxaa laga sameeyay balaastiig cufan oo siinaya dareen tayo iyo xoog leh cajiib ah. Waxay leedahay furitaanka xarigga isla qeybta dambe USB-C oo u shaqeyn doonta sida isku xiraha kaliya.
Fiilooyinka USB-C waa dherer 3m ah
Qeybta dambe waa qodob wanaagsan maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka faa'iideysato meel bannaan. Marka la eego taageerada, waxay leedahay taageero qaybta hoose, oo lagu hagaajin karo 180º iyo iyada oo leh xarig loogu talagalay taageerada wareejinta ama safarka caadiga ah. Waxay leedahay laba dhibcood oo dheeri ah oo taageero ah oo u dhaxeysa 180º iyo ugu dambeyn aagga kore, halkaasoo kamaraddu ku taal Waxay noo oggolaan doontaa inaan ku wareejinno 300º qotoma iyo 180º kale oo toosan. Tani waxay u oggolaaneysaa kaamirada in loo habeeyo si loogu isticmaalo miiska, sedex geesoodka ah ama iyadoo la adeegsanayo taageero dusha sare ee kormeeraha, halkaasoo aysan qaadan doonin boos shaashadda.
Dhinacaan waxaan kaheleynaa kudhowaad xiisa badan, in kasta oo aanan lahayn nidaam xiritaan ah oo muuqaal ahaan lagu daboolayo muraayadaha kujira kamaradda Haa, Anker waxaa ku jira laba dabool oo leh qaab isjiidhsan oo ku jira baakadka iyo inay yihiin dhejis, waan ku dhejin karnaa oo ka saari karnaa markay dareemaan dareemaha, sidan ayaan awoodi doonnaa inaan xirno kaameradda oo aan hubinno inaysan na duubeynin, xitaa haddii ay ku xiran yihiin. Si kastaba ha noqotee, waxaan leenahay aaladda tilmaanta hore ee LED-ka oo nooga digi doonta xaaladda kaamerada ay ku shaqeyso.
Asal ahaan Anker PowerConf C300 waa Bareesada & Ciyaar, tan waxaan ula jeedaa inay si sax ah u shaqeyn doonto oo kaliya iyadoo lagu xirayo dekedda USB-C kumbuyuutarkeena, hase yeeshe, waxaa weheliya USB-C adabtarada USB-A ee kiisaska ay lagama maarmaanka u tahay. Nidaamkeeda sirdoonka macmalka ah iyo awoodaha autofocus waa inay ku filnaadaan maalinteenna maanta. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim in la helo barnaamij taageero ah, xaaladdan aan ka hadlayno AnkerWork in aad ku soo dejisan karto bilaash, dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa fursado badan, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah suurtagalnimada in la cusbooneysiiyo softiweerka websaydhka oo sidaas lagu sii dheereeyo taageeradeeda
In software this waxaan awood u yeelan doonnaa inaan hagaajino saddex xaglood oo daawasho oo ah 78º, 90º iyo 115º, iyo sidoo kale xulashada inta udhaxeysa seddex sifo qabasho inta udhaxeysa 360P iyo 1080P, maraya suurtagalnimada in la isku hagaajiyo FPS, la dhaqaajiyo lana joojiyo diiradda, ah HDR iyo a Shaqada Anti-Flicker Aad u xiiso badan markii aan ku iftiiminayno nalalka LED-ka, waxaad horeyba u ogtahay in kiisaska noocaan oo kale fallaadhiyeyaasha ay caadi ahaan u muuqdaan kuwo xanaaq badan, wax aan si gaar ah uga fogaan doonno. In kasta oo wax waliba jiraan, waxaan lahaan doonnaa seddex qaab oo isdaba joog ah iyadoo kuxiran baahiyahayaga in aragti ahaan ay si buuxda uga faa'iideystaan ​​Anker PowerConf C300:
Waxaan kugula talineynaa haddii aad go'aansato kamaraddan waxaa laga heli karaa bogga Anker iyo Amazon, inaad ku deg dejiso rakibidda Anker Work oo aad fursad u hesho inaad cusboonaysiiso qalabka kamaradda, maadaama ay lagama maarmaan noqon doonto in la kiciyo oo la joojiyo shaqada HDR.
Anker PowerConf C300 waxaa lagu caddeeyay isticmaalkiisa saxda ah ee barnaamijyada sida Zoom, qaabkan, waxaan go'aansanay inuu noqon doono kamaradda ugu weyn ee loo adeegsado baahinta barnaamijka iPhone News Podcast. Kaas oo aan ka soo qaadano barnaamijka 'Actualidad Gadget' toddobaadle iyo halka aad ka bogan doontid tayada muuqaalkiisu. Sidaa si la mid ah, waxaan haysannaa laba makarafoon oo leh joojinta codka oo firfircoon si aan si cad ugu qabsanno codkeenna una baabi'inno dhawaaqa dibedda, waana wax aan awood u yeelannay inaan xaqiijino inay si la yaab leh u shaqeyneyso.
Kaamirada si fiican wax uga qabtaa xaaladaha iftiinka yar maaddaama ay leedahay nidaam sixitaan muuqaal ah oo loogu talagalay kiisaskaas si otomaatig ah. Wax dhibaato ah oo xagga hawlgalka ah kamaanu helin macOS 10.14 wixii ka dambeeyay, ama noocyada Windows-ka oo ka sarreeya Windows 7.
Shaki la'aan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qalab rasmi ah kulamadayada shaqada mahadnaqa tayada makarafoonkeeda iyo kala duwanaanta ay na siiso, haddii aad go'aansato inaad ku sharraxdo Anker PowerConf C300 shaki la'aan inaadan khaldami doonin, illaa iyo hadda, kan ugu fiican waan isku daynay. Ka hel 129 yuuro Amazon ama boggeeda internetka.
Ku dhejiyay: 1 Juunyo 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 27 ee 2021
Tayo muuqaal aad u wanaagsan
Qabashada codka weyn iyo autofocus
Software-ka hagaajiya isticmaalka iyo kaalmaynta wanaagsan
Boorsadii lagu qaadan lahaa ayaa la la’yahay
Barnaamijku wuxuu ku qoran yahay oo keliya Ingiriisi
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Anker PowerConf C300, kamarad casri ah iyo natiijo xirfad leh